Fahadisoana 10 ao amin'ny Twitter | Martech Zone
Alarobia, Jona 12, 2013 Talata, Jona 11, 2013 Douglas Karr
Amin'ny maha-bandy mitantana kaonty Twitter antsasaky ny folo (manokana, boky, orinasa, bilaogy ary vondrom-piarahamonina) dia tsy maintsy miombon-kevitra amin'ny # 8 amin'ity infographic ity aho. Misalasala ny momba ny Navy Veterans aho @navyvets Kaonty twitter te-handre momba ny Blogging Corporate amin'ny @corpblogging… Ary tsy misy olona te handre ny voloko politika amin'ny kaontiko manokana!
Twitter, toy ny sehatra hafa rehetra, dia fomba iray hafa hifandraisana amin'ny olona hafa. Ary misy fanao amin'ny Twitter tsy tsara torohevitra ary tsy mahomby izy io, na dia mety mampiahiahy ny hisintona ny Twitter aza izy ireo, nefa vao mainka manimba rehefa tena ampahibemaso. Ka raha sendra manao ny iray amin'ireo hadisoana fitsarana 10 (mamy ianao DashBurst fiaraha-miasa miaraka Ilay karazana Maple) amin'ny bitsikao na mbola ratsy kokoa eny an-dalambe aza mijanona azafady!
Mankasitraka ny bitsika fanentanam-panahy (# 7) tsindraindray aho mba hanentanana ihany koa!
Tags: dashburstlesoka twitter
17 Jiona 2013 à 1:07
Tsy hitako izay diso amin'ny teboka sasany. Izany no fomba fitondran'ny olona amin'ny tena fiainana. saingy tsy manao toy izany ry zareo ao amin'ny Twitter.
17 Jiona 2013 à 4:01
Misaotra noho ny nanomezany ahy finoana fa misy olona mihemotra amin'ireny fihetsika ireny toa ahy! hehe Manaiky aho fa mety ho tanora sy tsy misy dikany aho, saingy tsy hitako ny antony tsy ananan'ny olona fotoana hahatsiarovan-tena bebe kokoa momba ny sasany amin'ireo zavatra ireo. Ny fanamarihana manokana dia tsy maintsy alefa any amin'ireo mpitendry aingam-panahy (tsara fikasana) izay ny fako ara-pivavahana sy ara-panahy no mahatonga ahy hikorontana rehefa miseho amin'ny fahana.
Sep 24, 2013 amin'ny 6: 42 AM
Tsy miombon-kevitra amin'ny #1 sy #7, ny tsirairay dia mampiasa Twitter noho ny antony samihafa, ary ny olona dia manana safidy tsy hanaraka, nefa amin'ny ankapobeny dia lisitra tsara dia tsara.
Sep 24, 2013 amin'ny 10: 07 AM
Manaiky aho – ary tsy dia tiako loatra ny lisitry ny “fitsipika” raha jerena ny maha tanora ny media sosialy.